Yimaphi amathuba okulandelela ama-backlink?
Ngokuvamile, izixhumanisi ezingenayo noma iyiphi i-URL esebenzayo kusayithi ngaphandle kweyakho izobuyisela umsebenzisi kusayithi lakho uma uchofoze. Iphrofayli ye-backlink kuyo yisikhathi ukuhlanganiswa kwazo zonke izinkulumo ezivela kuwebhu yonkana ezikhomba kwisizinda sakho. Ikhwalithi futhi efanelekile kumakethe wakho we-backlink emakethe kungathuthukisa izinga lakho lewebhusayithi futhi ulethe ithrafikhi ehlosiwe emakhasini akho. Futhi ivesi le-vice lixhumanisa amawebhusayithi aphuthumayo we-spammy akungahambisani neziqondiso ze-Google zingaphazamisa imizamo yakho yokusesha injini futhi ibangele ukwehla kwi-rankings.
Ngokusho kwesihlungi se-Google Penguin esanda kusungulwa, wonke ama-backlink aphezulu aphuma kumawebhusayithi we-spammy adingeka ukuba ahlaziywe, futhi amawebusayithi abanjwe kulo msebenzi wokukhwabanisa kudingeka adalwe. I-Google ilinganisa kuphela lawo ma-backlink avela ku-spammy, amasayithi aphansi, amathekisthi okufanisa okufana nomdlalo, izixhumanisi zokuphawula kwebhulogi, noma amafama okuxhumanisa. Izindawo
Izindawo zokuthola izixhumanisi ezisemgangathweni
Izinketho zamahhala ngokuvamile zinikeza abanikazi bewebhu ngolwazi olulandelayo - uhlu lwe-backlink URLs, umbhalo we-anchor walezi zinkinga zangemva igunya labo lokuphatha.
Kodwa-ke, uma usulungele ukukhokha amathuluzi wokuhlaziya wokwakha isixhumanisi, uzohlinzekwa ngezinsizakalo ezilandelayo ngaphezu kwamamethrikhi angenhla: Ukubika okunzulu nokuningiliziwe, ukuqapha okuqhubekayo kwe-Backlink, ukucebisa iphrofayili ye-backlink, ukuphazamiseka kombhalo wokunamathisela okukhomba amakhasi ahlukahlukene kusayithi lakho, izaziso mayelana nezixhumanisi ezingaphandle zangaphandle ezingalungile, inqwaba yezibalo zamandla ezengeziwe, njalonjalo.
Kunezinsiza eziningi zokwakha izixhumanisi ezikhokhelwayo ezihlinzeka amaklayenti abo isikhathi sokuvivinya samahhala (f. e. Inkampani ye-digital ye-Semalt). Ikunika ithuba lokuhlola ikhwalithi yamasevisi abo futhi unqume ukuthi kufanele yini ukunakwa noma cha. Ungakhetha izinsizakalo ezizokwanelisa izidingo zebhizinisi lakho kanye nesabelomali Izinsizakalo eziningi zokwakha izixhumanisi ezikhokhelwe zingakunika amamethrikhi amaningi abalulekile futhi lula ukwenza inqubo yokuthola ijusi yokuxhumanisa lekhwalithi esizindeni sakho.
Amathuluzi azokusiza ukuba ulandele emuva ama-backlink
E-Backlink Profile Checker
Leli thuluzi linikeza ngezinsizakalo zamahhala nezakhokhelwayo. Isevisi yamahhala ayithathi isikhathi ukuze ama-backlink avuke. Izohlola izinkampani zakho zokubuyela emuva ezinkulungwane zokuqala. Uma udinga ukuphenywa okubanzi, kufanele ubuke enye indlela yokubona wonke ama-backlink wakho. Le sevisi izokunikeza umbiko wokuqala ohlanganisa i-URL yekhasi lapho i-backlink eya kusayithi lakho ifakwa khona, umbhalo we-anchor wokuxhumanisa, amanye amamethriki amakhulu (Ikhasi leRank ne-OBL). "Zonke izinkinobho zangaphandle" zizokukhombisa wonke amasayithi akhomba kwisizinda sakho noma okuqukethwe. Ngaphezu kwalokho, ungabheka izindawo lapho okushiwo khona umkhiqizo wakho.
. Isibonelo, inyanga yokuqala yezinsizakalo zokwakha izixhumanisi izobiza u-$ 0,99. Phakathi nale nyanga yokulinga, uthola ithuba lokukhetha amagama angukhiye afaneleko wokukhuthazwa kwe-SEO, umkhankaso wokwakha isixhumanisi, futhi uthole ukwesekwa kwamenenja. Uma ungathanda ukuthola okuningi, kufanele ukhokhe u-$ 99 kulezi zinyanga ezilandelayo. Kule mali uzothola izinsiza eziningi ezibandakanya:
ukuhlunga uhlu lwamagama angukhiye kanye nokwandiswa kokukhula komgwaqo okusheshayo;
Xhumanisa ukuthuthukiswa komkhankaso wokwakha ngokusekelwe emiphumeleni efinyelelekile kanye nokuhlongozwa kohlu lokusesha;
Ukuqaliswa kwezincomo ezivela emibikweni nokulungisa zonke iziphambeko ezikhona kuwebhusayithi Source .